Ogaden News Agency (ONA) – Caqli Xumada Xabashida iyo Safarka Jidgooyada ee Dhaba-Jiif Cabdi-Iley uu ku doonayo lacagaha Soomaalida
Caqli Xumada Xabashida iyo Safarka Jidgooyada ee Dhaba-Jiif Cabdi-Iley uu ku doonayo lacagaha Soomaalida
Posted by ONA Admin	/ January 19, 2014
Nidaamka Xabashida ee Gaaja Ku Noolka ah ayaa wuuu marayaa xaal aad u adag, kadib markii Ree Galbeedka iyo Deeq Bixiyayaasha Caalamku yareeyeen lacagihii tooska ugu dhici jirtay (direct budget support) Khasnadda Nidaamka Xabashida ee Gaaja Ku Noolka ah. Wararka ka imanaya Addis Ababa ayaa sheegay inaysan jirin wax lacag ah oo adag (hard currency) oo laga heli karo bangiyada dalku ama ay bin karaan.
Hadaba, waxaa maalmahan dambe socdaallo kala duwan oon nidaamsanayn ku jooga dalalka Yurub madax kala duwan oo uu soo diray Nidaamka Xabashida ee Gaaja Ku Noolka ah. Waxaa ugu dambeeyay wafdi uu hogaaminayo Ra-Isu-Wasaare Ku Xigeenka Ethiopia oo hadda ku sugan dalka Ingiriiska. Wafdigu wuxuu sheegay in “muhimadda safarkoodu yahay sidii dhaqaale iyo maalgalin looga heli lahaa Qurba-Joogta kasoo jeedda Geeska Afrika, gaar ahaan kuwa Soomaalida ah. Wafdigu wuxuu doonayaa sidii Qurbajoogta Soomaalidu ay maalgashi iyo Lacaga u geeyn lahaayeen Ethiopia”. Qorshaha wafdiga ayaa ah inay booqdaan wadama kale, sida Kanada iyo Belgimka (Canada & Belgium). Ila xog-ogaal ahaa ayaa sheegaya “in wafdigu damacsan yahay inay Dhaba-Jiif Cabdi-Iley (Cabdi Maxamuud Cumar) kaga tagaan London.
Safarkan ayaa ah mid aad uga duwan kuwii hore, dadkuna la ayaaban yahiin sida wax loo sheegay xaaladda safaaradda, iyo waxa ka socda London. Ma jiraan wax shirar ah oo Madaxda Xabashidu u qabteen ama la yeesheen bulshada Ethiopia. Dad badan ayaa ku tilmaamay waxa ka socda Dalka Ingiriiska inuu yahay “Safar Jidgooyo”, oo aan lahayn wax u jeedda ah. Qaar ka mid ah Jaaliyadda Ethiopia ayaa ku tilmaamay “Safar macna laan ah, oo meherad ay ka dhigayanaan madax Axmaara ah iyo Dhaba-Jiif Cabdi-Iley”.
Maalmihii lasoo dhaafay ayuu Dhaba-Jiif Cabdi-Iley shirar gos-gos ah u qabtay qayb qaar ka mid ah “Gudiga Jaaliyadda Soomaalida”. Dhaba-Jiif Cabdi-Iley wuxuu diiday in gudigu soo jeediyo wax warbixin ah ama qorshe ah, ama ay kala hadlaan kharashka iyo dhaqaalaha uu u baahan yahay ama lagu leeyahay xafiiska iyo maamulka jaaliyadda ee UK. Dhaba-Jiif Cabdi-Iley ayaa ku wargaliyey xubnihii shirka kasoo qayb galay arimahan:
– Waxaan idiin sheegayaa “la igalama hadli karto arimaha amaanka, horumarka, iyo wax cabasho ah”.
– Waxaan idinku imid hal arin, waana “sidii aad maalgashi ugu samayn lahaydeen dalka Ethiopia”. Maamulka Kililku wax walba diyaar ayuu idiinla yahay.
– Kililku wuxuu sameeyay “Shirkad” idinka caawinaysa wixii maalgalin ama dhisma ah ee aad rabtaan inaad ka samaysaan dalka. Dhaqaalihiina iyo lacagihiina kusoo dira shirkaddan.
– Iska ilaaliya inaad dad qaraaba ama asxaab ah wax u dhiibataan ama kusoo dirtaan dhaqaalihiina iyo lacagihiina. Dhaqaalihiina iyo lacagihiina waxaad kusoo diri kartaan ama u dhiiban kartaan “Shirkadan”.
Markii Dhaba-Jiif Cabdi-Iley wax laga waydiiyay “shirkadda iyo magaceeda” wuxuu ku jawaabay sidan “waa “Shirkada” aan idiin samaynay, waxay idinka caawinaysaa arimaha maalgashiga. Waa “Shirkad” sharciyaysan, oo ay dowladdu masuul ka tahay. Iska ilaaliya inaad maalgashigiina iyo lacagihiina aad kusoo dirtaan ama u dhiibataan dad qaraaba ama asxaab ah”. Jawaabta Dhaba-Jiif Cabdi-Iley ayaa dad badan ku abuurtay shaki, waxayna u arkaan “Safar Jidgooyo, Khiyaamo, oo wax lagu boobayo”, go’aan ayayna ku gaadheen “in wax xoola iyo howl ah aynan ku darsan karin Dhaba-Jiif Cabdi-Iley iyo qorshihiisa khariban”.
Qorshaha uu wato ama loo dhiibay Dhaba-Jiif Cabdi-Iley ayaa ah mid fashilan. Dhaba-Jiif Cabdi-Iley ayaa diiday wax wada hadal ah laga sameeyo “arimaha amaanka (xadhiga, xabsiyada, xasuuqa lagu hayo dadka shacabka), horumarka, iyo cabashooyinka”, iyo warbixintii iyo qorshihii jaaliyadda. Qaar ka mid aha ka qaybgalayaasha shirarkaa ayaa ka hadlay arimahaas “xadhiga iyo xasuuqa baahsan ee lagu hayo dadka shacabk baahsan, xabsiyada qarsoonida ah ee hoos yimaada Dhaba-Jiif Cabdi-Iley” iyo dhibaatooyinka Malayshiyaadka toos uga amarqaata Dhaba-Jiif Cabdi-Iley ku hayaan dadka gobolka”, waxaase ka hor istaagay Dhaba-Jiif Cabdi-Iley.
Dadku wuxuu is waydiinayaa xaqiiqada iyo ujeedada ka dambaysa “Safarka Jidgooyo”, caqli xumaha iyo ciyaarta Dhaba-Jiif Cabdi-Iley uu dhigayo shacabka Soomaalida iyo xukuumadda Xabashida, iyo waxa dhabtu tahay iyo dhibaatada madaxda Xabashidu iyo Dhaba-Jiif Cabdi-Iley ka wadaan London, boobkan qorsheysan ee qayaxan ee Xabashida iyo Dhaba-Jiif Cabdi-Iley ku hayaan qurbajoogta “u dhashay Soomaaliya” iyo hantidooda.
Cabdi-Iley waa ninka uu Nidaamka Xabashida ee “Gaaja Ku Noolka ah” u dhiibtay xukunka iyo gumaadka shacabka Soomaalida Ogaden. Sanadkii 2012 ayuu ahaa markii uu Dhaba-Jiif Cabdi-Iley uu adduun dhan 1.2 milyan doolaar ka ururiyay shirkadaha iyo shakhsiyaad Soomaali ah oo ku nool dalka UK. Qaar ka mid ah dadkii bixiyay lacagahaas ayaa noosheegay “inaysan garanaynin ujeedada ay u bixiyeen, waxa lagu qabanayo, meesha ay martay, iyo qaabka ay mustaqblka u heli karaan lacagaas”.
Horay ayaa loo yidhi “dayax nuurkii ma yeelan karo waligii Doofaar, nin aan talin jirin haddii xukun loo dhiibo, meel aaan laga guban Jirin ayaa laga gubtaa. Hadaba Nidaamka Xabashida ee Gaaja Ku Noolka ah ayaa iska dhaadhicyay in Dhaba-Jiif Cabdi-Iley uu lacago keeni karo. Dad badan ayaa aaminsan in Safarka Jid-Gooyada ee Dhaba-Jiif Cabdi-Iley uu ku damacsan yahay inuu boob ku qaato lacagta Soomaalia uu yahay kii uu ku fashilmi lahaa. Dad badan oo ahaa kuwii balan qaaday inay bixiyaan 1.2 milyan doolaar ee sanadkii 2012 ayaa iska diiday inay wa bixiyaan. Shacabka Soomaalida oo aad u fahansan khiyaamada Xabashida ayaa ah kuwa xadidi doona mowqifkooda ku aadan inay lacagaha caydha ah ee ay ka helaan Ingiriiska inay si sahlan ugu dhiibaan Xabashida iyo Dhaba-Jiif Cabdi-Iley.